‘म अहिले पनि बावुरामलाई भारतको दलाल भन्न सक्तिन’
गुणाखर बस्याल ‘सरोज’ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा प्रतिबद्ध एक राजनीतिकर्मी । राजनैतिक आन्दोलनमा पनि मुख्यत कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग जोडिएर गैर कम्युनिष्टहरुको पार्टी हुँदै फेरि कम्युनिष्ट आन्दोलनमै फर्केका उनी पर्वत क्षेत्र नं २ बाट २०६४ मा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका व्यक्ति समेत हुन् । नेपालको राजनीतिमा आउने उतार चढाव र व्यक्तिहरुमा आउने समस्या हरुबाट उनी पनि मुक्त छैनन् । डा. बाबुराम र उपेन्द्र यादवका दुई पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी पार्टीमा उनी केन्द्रीय सदस्य सहित गण्डकी प्रदेशको उपाध्यक्ष समेत चुनिएका थिए । अचानक नेकपामा प्रवेश गरेको भन्दै डा. बाबुरामबाट सार्वजनिक खप्कि खाएका गुणाखर वस्यालसँग संसारन्युजका तर्फबाट फर्शुराम भुर्तेलले गरेको कुराकानी ।
अहिले अचानक नेकपामा प्रवेश गरेर चर्चामा आउनु भयो, चर्चामै आउन अचानक प्रवेश गर्नु भएको भन्नै हल्ला छ नी ?
चर्चामा आउनैका लागि अचानक प्रवेश गरेको होइन । एउटा बहश, छलफल र प्रक्रियाको परीणाम अचानक रुपमा देखा परेजस्तो भएको हो । राजनीतिमा यस्तो स्वभाविक हुन्छ ।
डा. बाबुरामले त तपाईलाई अचाक्ली नै लेख्नु भए छ नि ?
म डा. बाबुरामलाई असाध्यै सम्मान गर्छु । उहाँलाई पाटी भित्र बाहिर सबैतिर भारत नजिकैको मात्र होइन, दलाल भन्दा पनि प्रतिबादमा लडिरहेको हु र अहिले उहाँले मलाई गाली गर्दा पनि उहाँलाई म कसैको तलब खाने मान्छे वा दलाल भन्न सक्तिन । मुलकको समृद्धिको बारेमा भिजन भएको तथा अध्ययनशील राजनैतिक व्यक्तिका रुपमा अझै पनि उहाँप्रति मेरो सम्मान छ । उहाँजस्तो मान्छेले म जस्तो सामान्य कार्यकर्तालाई यति तल झरेर बोल्नलेख्न पर्दैनथ्यो । उहाँकौ बौद्धिकस्तर र वर्वराहट सार्वजनिक भएको महसुस गरेको छु ।
गण्डक प्रदेशको उपाध्यक्ष जिम्मा पाउने वित्तिकै तपाई नेकपामा प्रवेश गर्दा उहाँलाई औडाहा भएको हो त ?
समयकालमा राजनीतिका धेरै शिर्ष व्यक्तिहरुको पनि उतार चढाव हुन्छ । उहाँकै हेरौ न, जनयुद्धकालभरी उहाँले प्रचण्डलाई धैर्यतापूर्वक सम्मान गर्नु भएन । संविधान बनाउन रातदिन खर्चेका बाबुराम घोषणा हुँदा साथ नचाहिदौ बोल्नु भयो र अन्तत मुलुकले नाकाबन्दी समेत भोग्यो, यो छर्लङ्गै छ । उहाँले आफूलाई हेर्नुहुन्न, अरुलाई मात्र दोष दिनुहुन्छ । उहाँको विचलन आउने र औडाहा पलाउने कुरा त सामान्य जस्तो भएको छ । म त भन्छु उहाँलाई फेरि पनि, उपेन्द्रजीको कार्यकर्ता बन्नु भन्दा ओली, प्रचण्ड र माधवको सहयात्री बन्नुस् ।
एकाएक प्रवेशकोे परिस्थिति के थियो र त्यस्तो तपाइमा ?
हेर्नुस् म समाज रुपान्तरणको लागि सक्रिय भै रहन रुचाउने मान्छे हुँ । सानै उमेरदेखि म क्रान्तिकारी धार तत्कालिन चौमको राजनीतिबाट आकर्षित हुँदै मशाल, एकताकेन्द्र र माओवादीको विभिन्न जिम्मेवारी लिएर क्रियाशील रहँदै आएको व्यक्ति हुँ । यस क्रममा मानिसले जीवनमा भोग्ने धेरै प्रकारका दुर्घटना मध्ये मैले पनि केही भोगे हुँला । नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत् देश र जनताको मुक्तिका लागि हिँडेको मैले व्यक्तिगत आर्जनका लागि राजनीतिलाई कहिल्यै माध्यम बनाएको छैन । समाज रुपान्तरणको यात्रा गर्दा जहाँबाट सहज हुन्छ र अर्थपूर्ण सहभागीता हुन्छ त्यहाँ रोज्नु सामान्य हो । डा. बाबुराम उपेन्द्रले सपथ खुवाएर राजनीति गर्नुपरेको स्थिति र समाजका घिसपिठे तत्वहरुसँगको सहकार्यले राजनैतिक त्यहाबाट लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने मेरो ठम्याइकै कारण म नेकपामा प्रवेश गरेको हो ।
तपाईले निर्वाचन जितेको क्षेत्र पर्वत २ मा विकासमा चासो देखाउनु भएन, पछि नयाँ शक्तिमा हुँदा पनि राजनैतिक गतिबिधि गर्न जानु भएन भन्ने बुझाइ मतदाताबाट थियो नि त ?
मैले तत्कालिन पर्वत २ र पर्वतमात्र होइन, छिमेकी जिल्लाहरुमा पनि विकासको प्रवाह गराउन भूमिका खेलेको छु । पर्वत २ मा भएका पछिल्ला विकास पूर्वाधारका जग शुरुवात गराउन मैले कति मेहनत गरे सबै मतदातालाई थाहा नै छ । संविधान निर्माणपछि भएको पार्टी विभाजन र नेकपाको कमिटीमा रहेर काम गर्न नपाएको कारण यस्तो गुनासो आएको होला । यसलाई मैले स्वभाविकै लिएको छु । ज्ञान, धैर्यता र कौशलताको अभावमा त्यतिबेला अपेक्षा अनुसार गर्न सकिन होला । २०६४ मा मलाई भोटदिनुहुने आम मतदातासँगसँगै रहिरहन नपाएकोमा म आफै पनि दुखी छु ।
नेकपा प्रवेशपछि अवको जिम्मेवारी कता लिँदै हुनुहुन्छ ?
मेरो राजनैतिक संलग्नता, योगदान, पृष्ठभूमि र अनुभव हेरेर पार्टीले खटाउने विषय हो । तर नेकपा प्रवेश गरेपछि गण्डकी प्रदैशका केही जिल्ला एवं पर्वतका साथीहरुसँग पनि भेटघाट गरें । उहाँहरुको आत्मीय स्वागतमात्रै होइन, पर्वत नै आइज भनेर बोलाउनु भएको छ । म भावुक हुँदै साथीहरुलाई भने पनि ‘मिले सम्म र सकेसम्म पर्वत नै आउनेछु ।’
अबको राजनीतिक जीवन स्थिर बनाउने संकल्प गर्नु भयो होइन ?
हो, हाम्रो हिजोका सपना पूरा भएका छैनन् । त्यसलाई पूरा गराउन नेकपाभित्रै रहेर प्रयास गर्ने कुरामा दृढ भएको छु । नेपाली समाजको रुपान्तरण र समृद्धिमा तुलनात्मक रुपले नेकपा नै मुख्य संवाहक भएकोले यो नै जीवन र संघर्ष बन्नेछ ।